Madheshvani : The voice of Madhesh - सर्लाहीमा २५० भन्दा बढी कांग्रेसमा प्रवेश
रामनगर गाउँ कमिटीले विर्ताटोलमा गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा स्थानीय चुनावमा नेकपाको तर्फबाट वार्ड नं १ मा वडाध्यक्षको प्रत्याशी श्याम यादव, वडा नं ५ का निर्वाचित वार्ड सदस्य मोमलती यादव लगायत कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन् ।
कांग्रेस प्रवेश गरेकाहरुलाई कांग्रेस नेता डा. अमरेश कुमार सिंह, प्रदेश सांसद विरेन्द्र सिंह र ओपेन्द्र कुशवाहा लगायत व्यक्तिले फुलमाला र अबिर लगाएर स्वागत गरेका थिए ।
नेता सिंहले बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै क्षेत्र न. ४ लाई शिक्षा, स्वास्थ, यातायात र खानेपानी लगायत पूर्वाधारको दृष्टिबाट जिल्लाकै नमुना क्षेत्र बनाउन लागिपरेको बताए ।
नेपाली कांग्रेसले क्षेत्रमा सबै विकासको पूर्वाधार निमार्ण गरी आमनागरिकको जनजिवनलाई सहज बनाउने कुरामा प्रतिबद्व रहेको बताए । क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरको प्राविधिक कलेज, सडक र अस्पताल समेत निमार्ण गरिने उनले बताए ।
सत्ताधारी राजनितिक दलको तानाशाही रवैयाको कारण क्षेत्रको आम नागरिकहरु त्रासको वातावरणमा बाँच्न बाध्य रहेको उनले बताए । नेपाली कांग्रेसको पहिलो एजेण्डा विकास र आम नागरिकको शान्ति सुरक्षा रहेको प्रदेश सांसद ओपेन्द्र कुशवाहाले बताए ।